भाइरल मार्केटिंग भनेको के हो? केही उदाहरणहरू र किन उनीहरूले काम गरे (वा गरेनन्) | Martech Zone
सामाजिक मिडियाको लोकप्रियताका साथ, म आशा गर्दछु कि अधिकांश व्यवसायहरूले उनीहरूले कार्यान्वयन गर्ने हरेक अभियानको विश्लेषण गरिरहेका छन् आशाको साथ यो उनीहरूको पहुँच र सामर्थ्य वृद्धि गर्न मुखको वचन मार्फत साझा गरिएको छ।
भाइरल मार्केटि aले एक प्रविधिलाई बुझाउँदछ जहाँ सामग्री रणनीतिकारहरूले जानबूझकर सामग्री डिजाइन गर्दछ जुन सजिलै सँग यातायातयोग्य र अत्यधिक व्यस्त हो जसले गर्दा यो धेरै व्यक्तिद्वारा छिटो साझेदारी गरिएको छ। सवारी साधन कुञ्जी हो - मानिसहरूका माध्यमबाट प्रचारको लागि प्रसारको लागि आवश्यक हो तर बढुवा वा एयरप्लेको लागि धेरै तिर्ने भन्दा। हास्यपूर्ण भिडियोहरू धेरै लोकप्रिय छन्, तर त्यहाँ छवि मेम्सहरू, र साझा प्रोत्साहन पनि छन् जुन समूह छुट जस्ता कार्य गर्दछन्।
यहाँ चक्र समय को एक महान सिंहावलोकन छ
बाट इमर्सन स्पार्ट्ज, इन्टरनेट वायरलताको मा एक विशेषज्ञ।
भाइरल मार्केटि Camp अभियानको उदाहरण
डोभ रियल (ly) सुन्दर
भोल्भो ट्रक जीन-क्लाउड भ्यान डम्मेको साथ।
जो पैदा भयो Delov डिजिटल को डिजिटलाइज्ड चक नोरिस संस्करण
र २२ जम्प स्ट्रीटको चैनिंग टाटमको साथ संस्करण।
बाट इन्फोग्राफिक उत्तम मार्केटिंग डिग्री यसले सामग्रीलाई भाइरल हुन मद्दत पुर्‍याउने केहि सुझावहरू प्रदान गर्दछ साथै भाइरल हुन डिजाइन गरिएको अभियान विकास गर्दा केबाट बच्न सकिन्छ भनेर।
टैग: Tatum भाइरल भिडियो चनिंग गर्दैढुकुर वास्तविक सौन्दर्यढुकुर भाइरल अभियानइमर्सन स्पार्ट्जजीन क्लाउड भान डैमे भाइरल भिडियोवायरल सामग्रीभाइरल मार्केटिंगभाइरल रणनीतिभाइरल भिडियोभोल्भो ट्रक भाइरल भिडियोभाइरल सामग्री के होभाइरल मार्केटिंग के हो
MyYappyDog: रियल एस्टेट एजेन्टको लागि सामाजिक CRM
साच्चिकै यो पोष्ट मनपरायो! म यसको संदर्भ दिनेछु किनभने हामी आफ्नै सामग्री मार्केटि strategy रणनीति बनाउँछौं।
मलाई मनपर्दछ कि तपाईंले कसरी उल्लेख गर्नुभयो कि हामी हाम्रो प्रयासमा भाइरल भइराखेको छैनौं भनेर योजना गर्नु हुँदैन। यस तरिकाले आधारभूत पोषण गरिन्छ, र विवरणहरू राम्रोसँग योजनाबद्ध छन्। हालको घटनामा बाँध्नु भनेको मेक्सल हुन वा विफल हुन सक्छ कुनै प्रयासमा भाइरल होस् वा नहोस्, चाखलाग्दो सोच।
ज्याक - वास्तवमा। पेशेवरहरू जसले भाइरल विज्ञापन अभियानमा काम गर्छन् पनि थाहा छ कि त्यहाँ जाने खतरा छैन। त्यस कारणका लागि, हामी हाम्रो अभियानहरू सँधै हास्यपूर्ण वा अनौंठो हुनुको सट्टा केही प्रकारको मान थप्न सुनिश्चित गर्न काम गर्दछौं। त्यस तरिकाले, यदि तिनीहरू फ्लप भए भने, तिनीहरूले अझै पनि सम्बन्धित साँघुरो दर्शकहरूलाई केही मूल्य प्रदान गर्न सक्छन्!
अक्टूबर २१, २०१ at २:०9 बिहान
उत्कृष्ट पोष्ट मैले साँच्चिकै रमाईलो गरें। यी उदाहरण साझा गर्न को लागी धन्यवाद। त्यहाँ कडा मेहनत र भाइरल विज्ञापनमा शामिल जोखिम को धेरै छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण छ, यदि यो भाइरल छैन भने तर म पूरै सहमत छु कि हामीले अभियानको योजना बनाउनु हुँदैन यो मान्दै यो भाइरल हुनेछ। त्यस्ता मनमोहक पोष्टहरूको अगाडि हेर्दै।
नोभेम्बर २०, २००। 4::2016 अपराह्न
भाइरल मार्केटिंगको धेरै राम्रो उदाहरण